काठमाडौको आरआर क्याम्पस अगाडि विप्लवको जनसभा, कार्यकर्ता कति आउलान त? हेर्नुहोस – TAJA KHAWAR
काठमाडौको आरआर क्याम्पस अगाडि विप्लवको जनसभा, कार्यकर्ता कति आउलान त? हेर्नुहोस
November 24, 2018 Taja Khawar राजनीति 0
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अाज आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रम प्रदर्शनी मार्गस्थित सडकमै हुने भएकाे छ । यसअघि खुल्ला मञ्च (रत्नपार्क)मा कार्यक्रम गर्ने भनिएकाे थियाे तर अन्तिममा अाएर कार्यक्रमस्थल परिवर्तन गरिएकाे हाे ।
पार्टीले आफ्नो पाँचौँ पुनर्गठन दिवसका अवसरमा विशाल जनसभा अायाेजना गरेकाे हाे । सभामा करिब १ लाख कार्यकर्ता तथा समर्थक उतार्ने दाबी गरिएकाे छ । यसका लागि शुक्रबारदेखि नै पर्चा र पोस्टरिङलार्इ व्यापकता दिइएकाे थियाे भने अाज बिहानै मञ्च सजिसजाउ पारिएकाे छ ।
यसअघि यसअघि जनसभा पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नै मुख्य रुपमा सम्बोधन गर्ने बताइएको थियाे । तर उनी अाउने निश्चित नभएकाले प्रवक्ता प्रकाण्डले मुख्य सम्बोधन गर्ने बताइएकाे छ ।
खुलामञ्च अर्थात रत्नपार्क अाफैमा खुल्ला नरहेकाेले सडकमा कार्यक्रम गर्न लागिएकाे नेकपाले जनाएकाे छ । हाल रत्न पार्ककाे आधा भाग बसपार्कले ओगटेको छ भने आधा भागमा दरबार हाइस्कुलका विद्यार्थीहरु पढ्ने टहरा बनाइएकाे छ ।
अाज दिनभरि नै प्रदर्शन मार्ग हुँदै चल्ने सवारी साधन ठप्प हुनेछन् । बाटाे दुवैतर्फ बन्द गरिएकाे छ । सरकारले नेकपाको कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौंका मुख्य स्थान र सभास्थल नजिक सुरक्षकर्मी तैनाथ गरेकाे छ ।
परिक्षामा चिट चोराएर पास गराउने भनी उठाइएको रू २,४०,००० यसरी जफत गरि फिर्ता गरियो हेर्नुहोस